MGR TSARAHAZANA DESIRE : « Tsy ampy olona tia tanindrazana i Madagasikara »
« Tsy ampy olona marina sy tena tia Tanindrazana eto amintsikaa ary efa mampiteny ny moana ny firongatry ny asan-jiolahy sy karazan’asa ratsy rehetra. Manjaka ny asan’ny ratsy eto amin’ny Firenena, tsy voafehy ny fandriampahalemana » 14 juin 2017
Hoy ny Arsevekan’ i Toamasina, ny Mgr Tsarahazana Désiré nandritra ny toriteniny tao amin’ny Ekar Fo Masin’ i Jesoa Tanambao Fahadimy Toamasina, nandritra ny fanamasinana ny Sakramentan’ny fankaherezana tamin’ ireo ankizy an-jatony mahery, ny alahady 11 jona lasa teo.
« Aoka ho tadidintsika fa toy izao no niseho tao Sodoma sy Gomora fahiny izay nahatezitra an’Andriamanitra ka naripaka tsy nasiana olona intsony io Firenena io ka lasa olona vaovao. Andrasana ho tonga amin’izany ve ny firenentsika ity vao hisy olona marina ? », hoy hatrany ny Arseveka.
« Tsy sasatry ny manao antso avo amin’ny Mpitondra izahay mba handinika ary hanao ho vaindohan-draharaha ny fiarovana ny ain’ ny malagasy sy ny fananany », hoy hatrany ny tenany.